Archive du 26/03/2012
Nitsodrano � Rajoelina
Nampitombo ny hatezeran�ny olona ny valin-teny feno fihantsiana nataon�i Andry Rajoelina nandritra ny fivahinianany tao amin�ny fahitalavitra TV Plus ny alin�ny zoma 23 martsa 2012 lasa teo, toy ny filazany fa tsy teo amin�ny fitondrana aza izy sahy niady maika fa efa eo amin�ny fitondrana sy ny nanambarany fa tsy tokony hanao politika intsony ireo nahavita heloka bevava ka omena amnistia ary indrindra ny fiampangany an�i Marc Ravalomanana ho maniraka olona hifofo ny ainy.	Hamaky ny tohiny...	Politique
�Iray tsy mivaky ny Arema�
Iray tsy mivaky ny arema ary tokana ihany ilay namorona azy dia ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier.
Nodinihan'ny governemanta anio
Hisy ny filankevitry ny governemanta tsy ara-potoana, hotanterahana eny Mahazoarivo amin'ity alatsinainy ity handinihana indrindra ilay volavolan-dal�na momba ny famotsoran-keloka, taorian'ireo tolo-kevitra maro samihafa voaray.
�Izaho tsy miaraka amin�ny jiolahim-boto�
Ny hevitro voalohany mikasika ny famoahana ny didim-pitsarana ny raharaha BANI Ivato tamin�ny alarobia 21 martsa teo iny, hoy Atoa James Ratsima, Sekretera jeneralin�ny antoko Madagasikara Firaisankina, dia mamofompofona fandrangitana adim-poko izy iny.
TIM misolo TIM ihany
Nafana ny adihevitra tao amin�ny kianjan�ny Magro Avaratsena ny tolakandron�ny sabotsy 24 martsa teo.
Saika hidina an-dalambe
Ny Emmo-Reg no tonga aloha
Nanamarika ny andron�ny sabotsy 24 martsa teo ny fikasan�ireo andian�olona mitonona ho mpanohitra ny FAT hidina an-dalambe hankalaza ny faha-telo taonan�ny tolona teo amin�ny Tsangambaton�ny fahaleovantena saingy nitsefotra izany satria efa ny Emmo-Reg no niatrana nialoha teo ka dia rava maina ny hetsika.
Parlemantera avy any Atsimo Andrefana
Mitaky ny hanesorana an-dRazanamahasoa Christine
Nesorina fa mampisara-bazana an�i Vatovavy Fitovinany
Ny disadisa ara-politika fa tsy ny fampandrosoana loatra no nifaninanan�ny lehiben�ny faritra Vatovavy Fitovinany teo aloha Rakamisilahy Martial sy ny PDS-n�ny Manakara teo aloha ihany koa Sileny Alban.
�Manaova fifidianana tsy misy kandid� Marc Ravalomanana raha sahy !�
�Fahotana mahafaty tahaka n�inona no nataon�ny lietna-kolonely Charles Andrianasoavina teny amin�ny BANI no mampigadra azy mandrapahafaty ?�, hoy ny fanontaniana napetraky ny mpikambana ao amin�ny Kongresin�ny tetezamita Randriampilamanana Rostand tetsy amin�ny Magro Behoririka tamin�ny sabotsy teo.
�Tsy vonona amin�izany famelan-keloka izany Rajoelina�
Mbola any am-ponja ny atahorana raha resaka famelana nefa dia efa namela ny helok�i Charles Andrianasoavina i Manandafy Rakotonirina ary nanao tsipaipaika ho azy mihitsy aza, hoy Rasoaniaina Malalatiana.
Nirarakompana ny valin-kafatra ho an-dRajoelina
Niporofoin�ny Fikambanan�ny gadra politika tetsy amin�ny Magro Behoririka tamin�ny sabotsy teo fa mbola maro ny namany mihidy any am-ponja ankehitriny ka hanova paikady ry zareo ato ho ato noho ny amin�izy ireo.
Voatsikera ambony ambany ny FAT
Raha tokony ho ny Rodobe no nanomana ny hetsika teo an-tokotanin�ny Magro Tanambao V Toamasina ny sabotsy 24 martsa teo, dia tsy nisy izany.
Niady mafy ny Sendikan�ny Admnistratera sivily, tamin�ny alalan�ny filoha Rakotonarivo Thierry mba ho olony no ho filohan�ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana mandritra ny tetezamita na CENIT.
Miantso ny vahoaka ho sahy hijoro
Teny tsy misorona no nataon�ireo mpitondra fivavahana ao amin�ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF nandritra ny vavaka ho an�ny firenena nokarakarainy tetsy amin�ny Gradin Sekoly Madera Anosivavaka, Ambohimanarina, ny antoandron�ny sabotsy 24 martsa 2012 teo.
Nohamafisina ny fisavana kara�panondro
Mitohy hatrany ny hetsika fisavana kara-panondro ataon�ireo mpitandro ny filaminana eto an-drenivohitra, indrindra amin�ireo mpandeha alina.
Natao ho an'iza ?
Mitodika any amin'ny Parlemanta indray manomboka izao ny sain'ny mpanara-baovao satria andrasana fatratra eny ny hahatongavan'ilay volavolan-dal�na momba ny famotsoran-keloka.